Iyo haigone kutsiviwa muhubhu inogadzira indasitiri, kunyanya mune bhaira fekitori, kutonhora midziyo fekitori, mhepo kutonhodza inotsigira fekitori uye auto zvikamu fekitori. Inowanzo shandiswa mune isina musono machubhu, senge yemhangura chubhu, aluminium chubhu, titanium chubhu, nickel chubhu, zirconium chubhu, musono chubhu, welded isina simbi chubhu, extruded isina simbi chubhu, yakapera chubhu capillary bvunzo. Inowanzo shandiswa kuyedza kukuvara kweiyo capillary chubhu nemhepo kumanikidza ingangoita 0.3MPa ~ 0.85mpa, kumanikidza kwemvura uye Kumanikidza kwemhepo kune zvakwakanakira nekuipira. Iyo pneumatic muchina * * inogona kuyedza zvidimbu zvina, ichipatsanura iyo otomatiki mhando uye iyo otomatiki mhando; iro bhuku remhando yemhando yekudyisa manyore uye yekuvhara mabhuku inokodzera 1m-5m; iyo otomatiki mhando * * inosarudza otomatiki mhando yeiyo yakatarwa kureba pombi, nekuti iyo yekuyedza zvinhu zvakareba uye hazvisi nyore kurodha uye kuburitsa.
Iko kuvandudzwa kwemahombe dhayamita anokwenenzvera anosangana nezvinodiwa tekinoroji yekuumburuka chigayo
Kumusoro kwekumusoro kweiyo yekunze dhayamita yeiyo embryo chubhu yakakwenenzverwa neruoko haitombo gamuchirwa. Kana iyo embryo chubhu yakanyanya kukora, zvinonetsa kuzadzikisa zvinodikanwa zveguyo rinotenderera. Nekuti iyo yekunze embryo duru yehubhu yakanyanyisa kukora uye iyo embryo nzvimbo yakanyanyisa, inogona kungogadziriswa nemidziyo inorema. Pakutanga, chidimbu chimwe chete kana zviviri zvinogona kubviswa. Mushure meizvozvo, kushanda kwekushanda kwave kuri nani kwazvo mukugadzirwa kwekambani kwedu. Iko kuvandudzwa kwezvitanhatu, zvisere zvidimbu uye hombe dhayamita ganda rinokwenenzverwa rinonyatsoenderana neyakaitika eiri rinotenderera mill rinodiwa.
Rt-50fa Kuchengetedza kaviri-Musoro Chamfering Muchina / Round Tube Chamfering Machine
Tora Dzazvino Mutengo Siya meseji.
Min. Order / Referensi FOB Mutengo
Chiteshi: Shanghai, China
Kugadzira Unyanzvi: 5000PCS / Gore
Mitero yekubhadhara: L / C, T / T.
Nzvimbo Yekutangira: Zhangjiagang, China (Mainland)
Zita Rekushandisa: HANRUI
Muenzaniso Nhamba: Rt-50sm
Chinyorwa Chinyorwa: Pipe neBar
Dhayamita pamusoro Pipe: 8-50mm
Makorari muchina, Iyo polishing michina inoshandiswa mune akasiyana maindasitiri inogona kugoverwa mu disc mhando, bhandi mhando uye ndiro mhando
Midziyo yekupukuta inoshandiswa mumaindasitiri akasiyana inogona kukamurwa kuita disc mhando, bhandi mhando uye ndiro mhando. Parizvino, pane maviri polisher disc uye gumi nembiri disc polishers, izvo zvinosangana nezvinodiwa nevatengi vakasiyana. Iyo disc polisher ndiyo yekuchengetedza-kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza michina yekukorobha iyo fekitori yedu inokurudzira zvine simba kune isina musono pombi, simbi isina simbi pombi, titanium pombi, nickel pombi, zirconium pombi uye kupedzisa pombi kurapwa Imwe mimwe michina ibhandi kupora muchina, iyo inonyanya kubata ne kumeso kupedzisa uye dhizaini yedhivha-yakatetepa-yakakomberedzwa chubhu kuti ibudirire kuita kwakanyanya uye kugadzirisa kweiyo chubhu.
Chip yemahara yekucheka muchina
Chip yemahara yekucheka muchina: inogona zvakare kunzi simbi titanium pombi yekucheka muchina. Iyo yakakodzera kune-yenguva-imwe yekucheka uye kuumbwa kwetenderedzwa pombi, mativi pombi uye yakakosha-yakaumbwa pombi. Iyo inotora kudzokorora kudyisa sisitimu, isina kuganhurirwa kune kureba kwepombi, ine yakakwira degree of otomatiki. Iyo inogona kunongedza zvakananga matatu-ehunyanzvi magirafu, otomatiki anoona iyo yekucheka track, uye ita chaiyo uye yepamusoro-yekumhanyisa machine. Muchina uyu unogadzirirwa zvizere otomatiki yepamutemo sisitimu, iyo inogona kusarudzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Izvo zvikamu zvakagadzirwa ne laser kugadzira hazvina burr, nhema muromo, uye yakafanana chigadzirwa saizi ine yakakwira kuenderana.
Centerless makorari muchina
Yakareba ichitariswa senzira inobudirira kwazvo yekubvisa masheya, kusakuya isina nzvimbo kunopa kushivirira kwepedyo uye kupedzisa kwepamusoro.
Mhando dzakasiyana dzemapoka akawandisa uye dzinosanganisira zvinotevera:
Kukuya Pasina nzvimbo
shafting uye mashoma rolls
Funga nezvepakati isina kukuya yekutanga pre-saizi yako barstock usati wa chucker mashandiro kana sikuru muchina zvikamu zvigadzirwa. Makambani mazhinji anotishandisa kuti tibate saizi panotonhora yakapera kutenderera kuti ikwane piro block block
Tinogona kukuya hurefu hwese hwehupamhi hwekunze kana "pwanya kukuya" nhanho pasi kune dhayamendi diki muchetatu nguva inodiwa nenzira dzekugaya dzesimbi pazvinhu zvinotevera.
kabhoni simbi uye simbi isina tsvina
aluminium uye alloys ayo
mhangura uye alloys ayo
ndarira uye allo ayo
mapurasitiki, kunyange hazvo asiri ese anogaya
girazi uye quartz